रुपन्देहीको कोटहीमाई सिल, दुई परिवारका १० लाई क्वारेन्टाइन राखियो – Health Post Nepal
२०७७ वैशाख १९ गते १९:१०
रुपन्देहीमा भेटिएका कोरोना संक्रमितको गाउँ सहित गाउँपालिकालाई शील गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। संक्रमित व्यक्ति कोटहीमाई गाउँपालिका वडा नं. १ सिपवाको पूर्णिहवा गाउँका २५ बर्षका युवा हुन् ।
उक्त सीपवाको पूर्णीहवा गाउँ बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि करिब ६ किलोमिटर नजिक छ । ति युवाको बुटवल कोरोना बिशेष (अस्थायी) अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनको स्वास्थ्य सामान्य रहेको प्रदेश ५ का स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोद कुमार गिरीले जानकारी दिए ।
बुटवलमा छुट्टै कोरोना अस्पताल बनाइएको हुँदा भैरहवा नजिक हुदाहुदैपनि ति यूवालाई बुटवल ल्याइएको डा. गिरीको भनाई छ । भैरहवाको भीम अस्पतालमा प्रसुती सेवा चलिरहेको छ डा. गिरीले भने, कोरोनाका बिरामी त्यहाँ राख्दा सेवा प्रभावित हुन सक्ने देखेर बुटवल ल्याऔं ।
अहिले त्यहाँ कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरिएको र सम्पर्कमा आउने साथै त्यहाँको क्वारेन्टाइनमा रहेका सबैको स्वाबको नमूना लिई पिसिआर गरिने उनको भनाई छ । क्वारेन्टाइनमा अहिले पनि १६ जना रहेको र त्यसमध्ये केहीको पिसिआर लिइसकिएको उनले जानकारी दिए ।
संक्रमित यूवा १५ दिन अघि नेपाल भारत सीमा नाका पटरीबाट नेपाल प्रवेश गरेको खुलेको छ । नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा शसस्त्र प्रहरीले कडाई गरेको अवस्था उनि त्यस नाकाबाट लुकिछिपी प्रवेश गरेका थिए ।
गाउँमा आएको थाहा पाएपछि उनलाई घर नपुग्दै एक स्थानीयले रोकेको र उनको दाई आएपछि क्वारेन्टाइनमा ल्याएको थियो । उनलाई रोक्ने यूवा र उनका दाइको दुबै परिवारलाई शुक्रबार नै क्वारेन्टाइनमा राखिसकिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नेत्रप्रसाद घिमीरेका अनुसार उनि सहित ३१ जना गाउँपालिको मर्चवार आर्दश माविमा रहको क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । त्यसमध्ये समयअवधी पुगेपछि आरडिटी टेष्ट गरी २० जना घर फर्केका थिए । त्यहाँ रहेका ११ जनाको बुधबार नेपाली सेनाले स्वाब लिई राष्ट्यि जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाएको थियो । त्यसमध्ये १ जनाको रिर्पोट पोजेटिभ देखिएको थियो ।
शुक्रबार मात्रै पनि भारतीरबाट आएका तीन जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । मुख्य नाकाहरुमा कडाई गरेपछि खुल्ला नाकाबाट सुरक्षाकर्मीलाई छक्काएर भारततर्फबाट नेपाल आउनेक्रम नरोकिएको स्थानीयको भनाई छ । त्यसरी आउनेहरुले रातको समय प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।